စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ မြန်မာ့လယ်ယာထွှက်ကုန် ပစ္စည်း ရောင်းဝယ်ရေးက ကြီးမှုးဖွှင့်လှစ် ခဲ့တဲ့ ကုန်သွယ်မှုမြှင့်တင်ရေးဆိုင်ရာ အခြေခံ သင်တန်း အမှတ်စဉ် (၁/၂၀၁၂)သင်တန်းဆင်းပွှဲအခမ်းအနားကို ၁၈.၁၂.၂၀၁၂ နေ့က နေပြည်တော် ရုံးအမှတ် (၅၂) သင်တန်းခန်းမမှာ ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ သင်တန်းဆင်းပွဲကို မြန်မာ့လယ်ယာ ထွက် ကုန်ပစ္စည်း ရောင်းဝယ်ရေးမှ ဦးဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှုး၊ ကုန်သွှယ်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှ ညွှန်ကြားရေးမှုးချုပ်၊ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှုးချုပ်များ၊ အထွေထွေမန်နေဂျာများ၊ ဌာနဆိုင်ရာ အရာထမ်း၊ အမှုထမ်းများ၊ သင်တန်းသား/ သင်တန်းသူများ အပါအ၀င် (၅၀) ဦးတက်ရောက် ခဲ့ပါတယ်။ စားသုံးသူကာကွယ်ပေးရေးဆိုင်ရာ အသိပညာပေးဆွေးနွေးဟောပြေနယ်လှည့်သင်တန်း
စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ မြန်မာ့လယ်ယာထွက်ကုန်ပစ္စည်းရောင်းဝယ်ရေးမှ ကြီးမှူး၍ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး မကွေးမြို့တွင် 2012 ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ (၂၉) ရက်နေ့မှ (၃၀) ရက်နေ့နှင့် ရေနံချောင်းမြို့တွင် ဒီဇင်ဘာ (၁) ရက်နေ့၌ မကွေးမြို့ ကုန်စည်ဒိုင်ခန်းမ၊ ရေနံချောင်း ကုန်စည်ဒိုင်ခန်းမတို့တွင် ရိတ်သိမ်းချိန်လွန်နည်းပညာဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်နှင့် စားသုံး သူ ကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာ အသိပညာပေး (ဆွေးနွေး၊ ဟောပြော၊ သင်တန်း) ကိုကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ရာ မကွေးမြို့တွင် ကုန်သည်လုပ်ငန်းရှင် များ၊ စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်သည့်တောင်သူများ၊ အထူးပြု ကုမ္မဏီမှ တာဝန်ရှိသူများ သင်တန်းသား (၅၀) ဦးနှင့် ရေနံချောင်းမြို့တွင် သင်တန်းသား (၅၉) ဦးတက်ရောက်ခဲ့ကြပါသည်။
စတုထ္ထအကြိမ် စားသုံးသူအကာအကွယ်ပေးရေး အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲကျင်းပပြုလုပ်ခြင်း
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL	MINISTRY OF COMMERCEBuilding 3, Nay Pyi Taw, The Republic of Union of Myanmar.Tel: 067 - 408002, Fax: 067 - 408004Email: mochmo@moc.gov.mm, mocdhmo@moc.gov.mm@2011 Ministry of Commerce. All rights reserved. Powered by Inforithm-Maze
www.commerce.gov.mm	Visitors 3791932 Since June 2008